နိုငျငံ၊ လူမြိုးနှငျ့ အခြုပျအခွာ အာဏာကို စောငျ့ရှောကျသော ဥပဒေ (အပိုငျး ၃) – Kyaw Zaw Oo's Blog
June 26, 2016 March 1, 2019 kyaw zaw oo
နိုငျငံ၊ လူမြိုးနှငျ့ အခြုပျအခွာ အာဏာကို စောငျ့ရှောကျသော ဥပဒေ (အပိုငျး ၃)
နိုင်ငံ၊ လူမျိုးနှင့် အချုပ်အခြာ အာဏာကိုစောင့်ရှောက်သော ဥပဒေ (အပိုင်း ၃)
ကတ်ပြားတွေ ထုတ်ပေးမှုဟာနည်းဥပဒေတွေနဲ့ မညီညွတ်တာကို အရင်ကတည်းက တွေ့ရဖူးတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် White Card ခေါ်အဖြူရောင် ကတ်ပြားဟာ ပြဋ္ဌာန်း နည်းဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ဆိုရင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ပန်းရောင်ကတ်ပြား ကိုင်ဆောင်သူ နိုင်ငံသား တစ်ဦးဦး သူ့ရဲ့ ပန်းရောင်ကတ်ပျက်စီး ပျောက်ဆုံးနေစဉ် ကာလမှာ ယာယီသုံးဖို့ ထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ကတ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဖြူရောင်ကတ်ကို နိုင်ငံသား ဟုတ်မဟုတ်မသိရသေးတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကို (လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့ ညီညွတ်ခြင်း မရှိဘဲ)ထုတ်ပေးခဲ့ကြတယ်။ ဒီလိုမျိုး ထုတ်ပေးလို့ ရတယ် ဆိုပြီးတော့ လ၀က တာဝန်ရှိသူတွေဟာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တရားဝင် ထုတ်ဖော် ပြောခဲ့ကြတယ်။
နိုင်ငံသား၊ ဧည့်နိုင်ငံသားနဲ့ ပြုနိုင်ငံသား ကတ်ပြားတွေကို (ကတ်ပြား အစစ်တွေကို)နည်းလမ်း ညီညွတ်ခြင်း မရှိဘဲ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းမှာ သိန်းချီလို့ထုတ်ပေးခဲ့ကြပြီးပြီ။ လ၀က အောက်ခြေ၀န်ထမ်းမှ အစ ၀န်ကြီးအထိ ဘယ်သူမှ တရားစွဲဆိုခံရခြင်း ထောင်ကျခြင်း မရှိသေးဘူး။ ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ နဲ့တရားစွဲဆိုခြင်း ခံရတာဟာ … ကျွန်တော် သိသလောက် ကော့သောင်းမှာ ဖမ်းမိတဲ့ဘင်္ဂါလီတွေ အမှုမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက လ၀က ၀န်ထမ်း နှစ်ဦးကို အမှုနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့ တရားစွဲတာဟာ ပထမဦးဆုံး အကြိမ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ အစိမ်းရောင် ကတ်ပြားဟာ ဥပဒေ နည်းဥပဒေ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနဲ့ညီညွတ်မှု ရှိ မရှိကို အသေအချာ သုံးသပ်ကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဥပဒေက လုံပေမယ့် ခေါင်မိုးက မလုံရင်
၁၉၈၂-ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဥပဒေဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ရေရှည် တည်တံ့ရေးကို ရည်မှန်းပြီး လူထု လူတန်းစား အသီးသီးရဲ့ ပါဝင် အကြံပြုချက်တွေနဲ့ အချိန်ယူ ရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ ဥပဒေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ယိုပေါက်တွေ ဟာကွက်တွေ လွတ်ပေါက်တွေ ရှိနိုင်ခြေ အင်မတန် နည်းကြောင်း ရှေ့က တင်ပြ ရေးသားခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဥပဒေကို ကိုင်တွယ် သုံးစွဲတဲ့ လူတွေကသာ ဖောက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ထည့်သွင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဘက်မှာ လွတ်ပေါက်နှစ်ရပ် ရှိနေသေးကြောင်းကိုလည်း စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ ထည့်ပြောရပါဦးမယ်။ အခု ဆက်ဆွေးနွေးမယ့် ဖော်ပြပါ အချက်တွေကတော့ ခေါင်မိုး လုံ မလုံနဲ့ အဓိက ပတ်သက်ပါတယ်။
လွတ်ပေါက် တစ် – ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈ (က)
၈၂ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈ (မူရင်း) စာသားက ဒီလို ဆိုပါတယ်။ “နိုင်ငံတော် ကောင်စီသည် နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးငှာ မည်သူ့ကို မဆို နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့် ရသူအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်” လို့ ဆိုတားပါတယ်။ (စကားရပ် အစားထိုးပြီးသား Update လုပ်ပြီးသား စာသားကတော့ ‘နိုင်ငံတော် သမ္မတ (သို့မဟုတ်) ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့’ သည် နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးငှာ မည်သူ့ကို မဆို နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် ဧည့်နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသား ပြုခွင့်ရသူ အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်’ လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါကို အဆိုးဆုံး အခြေအနေ လှမ်းမျှော်ပြီး တွေးကြည့်လိုက်မိတဲ့ အခါ မိမိတို့ နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရက တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအပေါ် သစ္စာ မရှိခဲ့ရင် ‘မည်သူ့ကို မဆို’ နိုင်ငံသား တစ်မျိုးမျိုး သတ်မှတ်ပေးနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ဒီပုဒ်မကို အလွဲသုံးစား လုပ်လာနိုင်တယ်။ ဒီဥပဒေရဲ့ အခြား နေရာတွေမှာ ဘယ်လိုပဲ ပြဋ္ဌာန်းထားထား ဒီနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ခွင့် ရထားတဲ့ အစိုးရမင်းကသာ ‘နိုင်ငံတော်၏ အကျိုး’ ရှိပါတယ်လို့ တစ်နည်းနည်းနဲ့ ပြောပြီး ‘မည်သူ့ကို မဆို’ နိုင်ငံသား တစ်မျိုးမျိုးပေးတာ လုပ်သွားနိုင်တယ်။ ဒါဟာ လွတ်ပေါက် (Loophole) တစ်ခု အနေနဲ့ ရှိနေတယ်။
လွတ်ပေါက် နှစ် – ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဥပဒေ ပုဒ်မ ၇၅
၈၂ ဥပဒေ ပုဒ်မ-၇၅ (မူရင်း)စာသားက ဒီလို ဆိုပါတယ်။ ‘ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ (အစိုးရအဖွဲ့)သည် လိုအပ်သော လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို နိုင်ငံတော် ကောင်စီ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ရမည်’ လို့ ဆိုထားပါတယ်။ (စကားရပ် အစားထိုးပြီးသား update လုပ်ပြီးသား စာသားကတော့ ‘ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့သည် လိုအပ်သော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို နိုင်ငံတော် သမ္မတ (သို့မဟုတ်) ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ရမည်’ လို့ ဆိုပါတယ်။) ၈၂ ဥပဒေ ပုဒ်မ-၇၅ အရ အပ်နှင်းထားတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို ကျင့်သုံးပြီး သကာလ ထိုစဉ်က ၀န်ကြီးအဖွဲ့ဟာ နိုင်ငံတော် ကောင်စီရဲ့ သဘောတူညီချက်နဲ့ ‘မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ’ ကို အမိန့်ကြေငြာစာ အမှတ် ၁၃/၈၃ အားဖြင့် (၁၀-၀၉-၁၉၈၃) ရက်နေ့မှာ တစ်ဆက်တည်း ပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့ပြီး ဖြစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ရှေ့က ခိုင်ခိုင်မာမာ ဘယ်လိုပဲ ပြဋ္ဌာန်းထား ပြဋ္ဌာန်းထား ဥပဒေကို ယိုပေါက်တွေ ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို ရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းလာခဲ့ရင် . . . တိုင်းပြည်ရဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာနဲ့ အမျိုးဘာသာ သာသနာကတော့ ရေစုံမျောရမယ့် အခြေအနေ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
၈၂ ဥပဒေနဲ့ စိစစ်မှုကို လုပ်ဆောင်ဖို့ရာကို အဆိုတင်နိုင်ဖို့အတွက် မကြာခင်က ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှာ ကြိုးပမ်းကြတဲ့အခါ အဆို တင်သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးတဲ့ အမတ်တွေ ဆွေးနွေး အပြီးမှာ ပါတီကြီး တစ်ခုရဲ့ အမတ်တွေ ဘယ်သူမှ လက်ခုပ် မတီးကြတာဟာ ဘယ်ဘက်ကို ဦးတည်နေသလဲ ဆိုတာ တွေးတော စဉ်းစားစရာ ဖြစ်နေပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား အရေးမှာ ရှမ်းက ဦးဆောင်နေလေ့ ရှိခဲ့ရာကနေ ယနေ့ အချိန်အခါမှာ မြေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာ ရှမ်းနဲ့ တန်းတူ ရင်ဘောင်တန်း ဦးဆောင်လာတဲ့ ရခိုင်ကို နိုင်ငံရေး အားသာချက်တွေ မရနိုင်အောင် နှိပ်ကွပ်ထားနိုင်မှ ဖြစ်မယ် ဆိုတာမျိုး၊ ရခိုင်ကို ကုလားနဲ့ ကစားထားမှ ဖြစ်မယ် ကုလားနဲ့ ညှပ်ထားမှ ဒီကောင်တွေ ကြပ်နေမယ်လို့ စဉ်စားပုံမျိုးကို အရင် အစိုးရ အဆက်ဆက်ဆီက အမွေဆက်ခံ ထားမိတယ် ဆိုခဲ့ရင် . . . ဒီ ဘင်္ဂါလီ အရေးဟာ ဒီလို ကစားရင်း ကစားရင်းနဲ့ ကြီးထွားလာခဲ့တာဟာ (ပြည်ထောင်စု အဆင့်) မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ နောင်ရေး ရင်မအေးစရာ ဖြစ်လာနေပြီဆိုတဲ့ အချက်ကိုလည်း နှလုံးသွင်းပေးကြဖို့ ပန်ကြားလိုပါတယ်။ ဖဆပလ မဲနိုင်ဖို့အတွက် ခေါ်တော ကုလားတွေကို သမ္ဗာန် အစီးပေါင်း ဆယ်ချီ ရာချီတိုက် နတ်မြစ်ကို ကျော်သွင်းပြီး မဲပေးစေခဲ့တာ . . . ၊ စစ်အစိုးရ လက်ထက် ထောက်လှမ်းရေး ကြီးစိုးစဉ် ရခိုင်တွေကို ပြားပြားဝပ်အောင် နှိပ်ကွပ်ပြီး ကုလား လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ဖွံ့ဖြိုး ကြီးထွားအောင် မြေတောင် မြှောက်ပေးခဲ့တာ . . . ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ မဲရဖို့အတွက် ဘူးသီးတောင် မောင်တောမှာ အဖြူရောင်ကတ်တွေ ထုတ်ပေးပြီး မဲပေးခွင့် ပြုခဲ့တာ . . . ၊ စသည်ဖြင့် စသည်ဖြင့် . . . ဒီလိုမျိုး လုပ်ရပ်တွေ မူဝါဒတွေ ချဉ်းကပ် စဉ်းစားမှုတွေဟာ ဒီဘက်မှာ ပါမလာတော့ဖို့ကို ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အာမားရ်ရှိုနား မိုင်ယန်မား။ ကျွန်ုပ်၏ မြန်မာ ရွှေနိုင်ငံ
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ (၇) ရက် (၀၇-၀၆-၂၀၁၆) ရက်နေ့က ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ကာဒီ (ဘင်္ဂါလီ) ရွာကို လ၀က တာဝန်ရှိသူတွေ သွားရောက်ပြီး နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး လုပ်ငန်း အဆင့်တွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ သွားရောက်ခဲ့ကြပေမယ့် စိစစ် လုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာ လူမျိုး/ဘာသာ အချက်အလက်တွေကို မေးမြန်း ထည့်သွင်းခြင်း မပါရှိတဲ့အတွက် ကာဒီ ရွာသား ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးတွေက နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ဖြစ်စဉ် မလုပ်နိုင်ကြောင်း ငြင်းပယ်ခဲ့တယ်။ အစစ်ခံမယ့် လူတွေက ငြင်းပယ်တဲ့အတွက် စစ်ဆေးရမယ့် တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ ဘာမှ မလုပ်နိုင်ဘဲ ပြန်လာခဲ့ကြရတယ်။
မိမိ သိသလောက် နိုင်ငံတော် သမ္မတနဲ့ ဒုသမ္မတတွေဟာ တိုင်းရင်းသားတွေ ဖြစ်ကြရမယ် ဆိုတဲ့ အချက်က လွဲပြီး မည်သည့် နိုင်ငံသား မဆို (တိုင်းရင်းသား ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ်) ဥပဒေအရ ရပိုင်ခွင့်တွေ တန်းတူ အကုန် ရကြတယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ သည် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံသား ဟုတ်၊ မဟုတ် မသေချာသူ ခိုးဝင်တွေလို့ သံသယရှိခြင်း ခံရသူ လူအုပ်စု တစ်စုဟာ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကို လုပ်ပေးပါမယ် ဆိုပြီး အိမ်တိုင်ရာရောက် လာလုပ်ပေးတာကို လူမျိုး/ဘာသာ အချက်အလက် မပါလို့ နိုင်ငံသား စိစစ်မှု ဖြစ်စဉ်ကို ငြင်းပယ်တယ် ဆိုတာကို ကြည့်လိုက်လျှင် မြင်သာနေတဲ့ အချက်တစ်ချက် ပေါ်လာပါတယ်။ သူတို့ အတွက် နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ဆိုတာ အရေးကြီးရင် ကြီးမယ်၊ ဒါနဲ့ ထပ်တူ (သို့မဟုတ်) ဒါထက် အရေးကြီးတာကတော့ သူတို့ရဲ့ လူမျိုးနဲ့ ဘာသာ identity ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အတွက် လူမျိုးဘာသာက ဘာကြောင့် အရေးကြီးရသလဲ။
သူတို့အတွက် လူမျိုး ဘာသာက ဘာကြောင့် အရေးကြီးရသလဲ ဆိုတော့ လူမျိုး ဘာသာကို အခြေခံပြီး ထပ်ဆင့် ရလာနိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေး၊ (တစ်ယောက်ချင်း မဟုတ်တဲ့ အစုအဖွဲ့အလိုက်) နိုင်ငံရေး ရပိုင်ခွင့်၊ နယ်မြေ ပိုင်စိုးခွင့်၊ နယ်မြေအလိုက် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် အစရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်တွေကို လှမ်းမျှော်ကြည့်နေကြပြီးသား ဖြစ်နေကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း(၂၀)ကျော် ကျွန်တော် ပြည်ဂျီတီအိုင်မှာ တက်နေစဉ် ကာလကလို့ ထင်ပါတယ်။ ပြည်မြို့ထဲမှာ သွားလာနေတုံး မိုးရွာတာနဲ့ ထီးမပါတော့ နီးရာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ ၀င်ထိုင်ရပါတယ်။ ဘင်္ဂါလီဆိုင် တစ်ဆိုင် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲသည် အချိန်မှာ မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတို့ ကန်တဲ့ပွဲ တီဗွီမှာ လာနေတယ်။ (ဘယ်ဖလား ဘာပွဲစဉ်လဲ ဆိုတာကိုတော့ အမှတ်တမဲ့ပါပဲ။) ဆိုင်ရှင် မိသားစုနဲ့ သူနဲ့ မျိုးနွယ်တူသူတွေ အားလုံးက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်က အသည်းအသန် အားပေးနေကြတယ်။ မြန်မာ ဂိုးသမားက ဘာလုပ်လိုက်ပြန်ပြီ၊ ညစ်လိုက်ပြန်ပြီ၊ ဘာညာ စသည်ဖြင့် သူတို့ပါးစပ်က ပြောကြ ဆိုကြ တောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့ အားပေးကြ လုပ်နေကြချိန်မှာ ကျွန်တော်နဲ့ အခြား စားသုံးသူတွေက အသာလေး ငြိမ်ပြီး ဘာမှ မပြောပဲ တီဗီကိုပဲ ကြည့်နေခဲ့ကြတယ်။ မှတ်မှတ်ရရပါပဲ။ အဲဒီ ကတည်းက ရင်ထဲမှာ မေးခွန်း တစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဘယ်သူတွေဟာ ဘယ်နိုင်ငံကို သစ္စာခံကြသလဲ၊ ဘယ်အလံကို အလေးပြုမလဲ၊ ဘယ်နိုင်ငံတော် သီချင်းကို ဆိုကြမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။
၁၉၈၂-ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဥပဒေမှာ နိုင်ငံသားပြုခွင့် ရရန် လျှောက်ထားသူရဲ့ အရည်အချင်းတွေထဲမှာ ‘တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကား တစ်မျိုးမျိုးကို ကောင်းမွန်စွာ ပြောတတ်ခြင်း ဆိုတာကို ထည့်သွင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ အမေရိကန်မှာလည်း နိုင်ငံသားလျှောက်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ အင်္ဂလိပ် ဘာသာကို မိခင် ဘာသာစကား အနေနဲ့ ပြောတဲ့သူပင် ဖြစ်စေကာမူ (ဥပမာ ကနေဒီယန်တွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့) ဘာသာစကားပိုင်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုငယ်တစ်ခုကို ဖြတ်သန်းရပါသေးတယ်။ နောက်ပြီးတော့ နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်း၊ နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး စနစ် စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးလို့ ကျေနပ်လောက်တဲ့ အဖြေတွေရမှ အမေရိကန်နိုင်ငံသားပြုခွင့် ရကြပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသား အဖြစ် ကျမ်းကျိန်တဲ့နေ့မှာ ကျမ်းကျိန်ပြီးသည်နောက် အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံတော် သီချင်းဖြစ်တဲ့ The Star-Spangled Banner ကို သံပြိုင် သီဆိုကြရပါတယ်။
ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ကာဒီ (ဘင်္ဂါလီ) ရွာကို လ၀က တာဝန်ရှိသူတွေဟာ နိုင်ငံသား စိစစ်မှုကို လုပ်ဆောင်ဖို့ သွားရောက်ရာမှာ မအောင်မြင်ဘဲ ပြန်လာခဲ့ရတဲ့နေ့က အဲဒီ သတင်းကို ဖတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတာ တစ်ခုရှိတယ်။ လူမျိုးဘာသာ နာမည် မပါလို့ စာရင်း အကောက်မခံဘူး ဆိုတဲ့ သူတွေပေါ့နော် . . . ဒီလူတွေဟာ ဒီနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံတော် သီချင်းကို ဆိုမှ ဆိုတတ်ပါ့မလားလို့ ကျွန်တော် တွေးနေမိတယ်။ ဒီဘက်က နိုင်ငံတော်သီချင်းကို ဆိုဖို့ မသင်ဘဲ ဟိုဘက်က နိုင်ငံတော် သီချင်းကို ဆိုဖို့ သင်ပေးရင် သူတို့အတွက် ပိုတောင် လွယ်ဦးမယ်လို့ တွေးတောမိပြန်တယ်။ ရာဘင်ဒရာနတ်တဂိုး ရေးသားခဲ့တဲ့ “အာမားရ်ရှိုနားဘင်းဂလား (ကျွန်ုပ်၏ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရွှေနိုင်ငံ)” သီချင်းက သူတို့အတွက် ဆိုရ ပိုလွယ်နေလိမ့်ဦးမယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့ဘက်က စာရင်းသွားကောက်တဲ့ အရာရှိမင်းများကပဲ အဲဒီ ရွာသူရွာသားတို့ အသာတကြည်နဲ့ စာရင်းအကောက်ခံ ပေးဖို့ရာ အတွက် အဲဒီ နိုင်ငံတော် သီချင်းကို မြန်မာနိုင်ငံ နာမည် ထည့်ဆိုပြရင်ကော ဘယ်လိုနေမလဲလို့ တွေးတောမိတယ်။
အရင်က မြန်မာနိုင်ငံကို နတ်မြစ်ဟို ဘက်ခြမ်းမှာ ဘော်ရ်မာလို့ ခေါ်ကြတယ်၊ ကြမာပေါ့။ နောက်ပိုင်းကျတော့ မိုင်ယန်မာလို့ ခေါ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊ Myanmar ပေါ့။ အဲဒီတော့ သူတို့အကြိုက် “အာမားရ်ရှိုနား ဘော်ရ်မာ”၊ ဒါမှမဟုတ် “အာမားရ်ရှိုနား မိုင်ယန်မား” (ကျွန်ုပ်၏ မြန်မာရွှေနိုင်ငံ) သီချင်း အသစ်လေးနဲ့မှ ပြေလည်မှာလား စဉ်းစားကြပါလေကုန်။
အမေရိကန် နိုင်ငံတော် သီချင်း The Star-Spangled Banner ကို မက္ကဆီကန်နွယ်ဖွား လက်တင်နိုတွေ ဆိုရလွယ်အောင် စပိန် ဘာသာစကားနဲ့ သီဆိုခွင့်ပြုဖို့ ၂၀၀၆-ခုနှစ် ၀န်းကျင်လောက်က အာသီသပြုကြတာကို အမေရိကန် စာရေးသူ Lee Harris ကတော့ ကန့်ကွက် ရေးသား ခဲ့ဖူးတယ်။ အရင်အတိုင်းပဲ ကောင်းပါတယ်တဲ့..သူက ဆိုတယ်။ ဖိနပ်နဲ့ မတော်လို့ ဖနောင့်ကို မလှီးပါနဲ့လို့ ပြောချင်တဲ့ သဘောပါ။
ယနေ့ အုပ်စိုးသူ အပေါင်းတို့ ခေါင်းစားနေကြတဲ့ “နိုင်ငံသား မဖြစ်နိုင်သူတွေကို ဘယ်လို ရှင်းထုတ်မလဲ” နဲ့ “ဒီလူတွေ နိုင်ငံသား ဖြစ်နိုင်အောင် တည်ဆဲ ဥပဒေကို ဘယ်လို အပေါက်ဖောက်ရမလဲ” ဆိုတဲ့ ချဉ်းကပ်မှု နှစ်ခုကြားက ရွေးချယ်မှု အကျပ်အတည်းဟာ ဖိနပ်ကို လှီးမလား ဖနောင့်ကို လှီးမလား ဆိုတဲ့ အကျပ်အတည်းနဲ့ သဘောချင်း ခပ်ဆင်ဆင်လို့ ပြောရင် မှားမယ်လို့ မထင် . . . ။
နိုင်ငံသား စိစစ်မှု အစစ်အမှန် ဆိုတာ ဒီလိုပါ
၁၉၈၂-ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဥပဒေအရ – (၁) နိုင်ငံသား၊ ဧည့်နိုင်ငံသားနဲ့ နိုင်ငံသား ပြုခွင့်ရသူ ဆိုပြီး သုံးမျိုးသုံးစား ရှိကြောင်း စကားဦး ဖော်ပြလိုတယ်။
(၂) ၁၅-၁၀-၁၉၈၂ ရက်နေ့ မတိုင်ခင်က ၄၈ ဥပဒေ တည်ဆဲကာလက နိုင်ငံသား လျှောက်ထားပြီးသား သူတွေကိုတောင် နိုင်ငံသား မပေးတော့ဘူး၊ ဖြစ်သင့်တယ် ထင်ရင် ထောင်ဧည့်နိုင်ငံသားလို့ပဲ ၈၂ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၃ အရ သတ်မှတ်နိုင်တယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။ ဧည့်နိုင်ငံသားလို့ပဲ သတ်မှတ်ပေးခဲ့ကြတယ်။ ဆိုတော့ကာ အခုမှ ၃၄-နှစ် ကြာပြီးခါမှ ဧည့်နိုင်ငံသားထက် အဆင့်မြင့်တဲ့ နိုင်ငံသား အဖြစ်ကို လာလျှောက်နေလို့ မရတော့ဘူး။ ရှင်းရှင်း ပြောရရင် ဧည့်နိုင်ငံသား အဖြစ်ကို လျှောက်ထားခွင့်နဲ့ နိုင်ငံသား အဖြစ်တို့ကို လျှောက်ထားခွင့်တို့ မကျန်တော့ဘူး။ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူ အဖြစ်ကိုပဲ လျှောက်ထားနိုင်တော့မှာ ဖြစ်တယ်။ (ရည်ညွှန်းချက် တစ်၊ ၈၂ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၃။ “၁၉၄၈- ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်မှု အက်ဥပဒေ အရ နိုင်ငံသား ဖြစ်ရန် လျှောက်ထားသူများသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အရည်အချင်းများ ကိုက်ညီပါက ဧည့်နိုင်ငံသား အဖြစ် ဗဟို အဖွဲ့က သတ်မှတ်နိုင်သည်”) (ရည်ညွှန်းချက် နှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ အပိုဒ် ၂၅ (ခ)။ “ဥပဒေ အာဏာ တည်သည့် ၁၉၈၂-ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းတွင် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၈ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရမှ အပ နိုင်ငံခြားသား တစ်ဦးသည် မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ နိုင်ငံသား အဖြစ်ကို ရရှိမည် မဟုတ်ပါ”)
(၃) ဒါတင် မကဘူး၊ နိုင်ငံခြားသားတွေ (နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်ကြောင်း သေချာနေသူတွေဟာ) နိုင်ငံသား ပြုခွင့်ရသူ အဖြစ်ကိုတောင် လျှောက်ထားခွင့် မရှိဘူး။ (ရည်ညွှန်းချက်၊ ၈၂ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၇၂။ “ဤဥပဒေ အာဏာ တည်သည့်နေ့မှ စ၍ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ် အရမှ အပ မည်သည့် နိုင်ငံခြားသားမျှ နိုင်ငံသားပြုခွင့် ရရန် လျှောက်ထားခွင့် မရှိစေရ”)
(၄) အနည်းဆုံး မိဘ တစ်ဦးဦးဟာ နိုင်ငံသား အမျိုးအစား တစ်မျိုးမျိုး (နိုင်ငံသား၊ ဧည့်နိုင်ငံသား၊ ပြုနိုင်ငံသား) ဖြစ်သူတွေမှသာလျှင် နိုင်ငံသား ပြုခွင့်ရသူ (ပြုနိုင်ငံသား) အဖြစ်ကို လျှောက်ထားနိုင်တယ်။ နိုင်ငံတကာ ဖိအားပေးတာကို မြန်မာနိုင်ငံက ခံရတဲ့ အတွက်ကြောင့် မို့လို့ အမိ သို့မဟုတ် အဘ တစ်ဦးဦးတောင် ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ သူတွေကို နိုင်ငံသား ပြုခွင့်ရသူ အဖြစ် လျှောက်ထားခွင့် ပေးလိုက်ပါကွာ ဆိုတာမျိုးကို ၈၂ ဥပဒေက ပြဋ္ဌာန်း ပေးမထားဘူး။ (ရည်ညွှန်းချက်၊ ၈၂ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၃ အား အကျယ် ဖတ်ပါရန်။)
(၅) ဒီလိုမျိုး မဟုတ်ရင်လည်း အရင် ဥပဒေ အဟောင်း (၄၈ ဥပဒေ) အရ လျှောက်ထားဖို့ ကျန်ရှိနေသေးပါတယ် ခင်ဗျ ဆိုပြီးတော့ “ခိုင်လုံသော သက်သေ အထောက်အထားများဖြင့်” ပြုနိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့် ရရှိရေးကို လျှောက်ထားနိုင်တယ်။ (ရည်ညွှန်းချက်၊ ၈၂ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၂။ “၁၉၄၈-ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့ မတိုင်မီ ကာလတွင် နိုင်ငံတော် အတွင်း၌ ရောက်ရှိ နေထိုင်သူနှင့် ထိုသူတို့မှ နိုင်ငံတော်အတွင်း မွေးဖွားသည့် သားသမီးသည် ၁၉၄၈-ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှု အက်ဥပဒေအရ လျှောက်ထားရန် ကျန်ရှိနေကြောင်း ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြင့် ဗဟို အဖွဲ့သို့ နိုင်ငံသားပြုခွင့် ရရန် လျှောက်ထားနိုင်သည်။”)
(၆) အထက်က ပြောသလို ၄၈ ဥပဒေအရ လျှောက်ဖို့ ကျန်နေခဲ့ပါတယ် ဆိုတာကို ခိုင်ခိုင်လုံလုံ တင်ပြမယ် ဆိုလည်း အဲဒီ ၄၈ ဥပဒေမှာ ဖော်ပြထားတာက – မလျှောက်ထားခင်မှာ လျှောက်ထားဖို့ ကြံရွယ်ပါတယ် ဆိုတာကို အကြောင်းကြား ထားခဲ့တာဟာ တစ်နှစ်ကနေ ငါးနှစ်အတွင်း ကာလမှာ ရှိနေရပါမယ်။ လျှောက်မယ်လို့တော့ စိတ်ထဲက ကြံခဲ့ဖူးတာပဲလို့ လာရွှီးလို့ မရပါဘူး။ (ရည်ညွှန်းချက်၊ ၄၈ ဥပဒေ ၇ (၁) (ဃ) “. . . သို့ရာတွင် ထိုသူသည် နိုင်ငံသားပြုမှု လက်မှတ် ရလိုကြောင်း မလျှောက်ထားမီ တစ်နှစ်ထက် မနည်း ငါးနှစ်ထက် မများ ကြိုတင်၍ ဤအက်ဥပဒေအရ ပြဋ္ဌာန်းထားသော နည်းဥပဒေများ၌ ပါရှိသည့် ပုံစံအတိုင်း နိုင်ငံသားပြုမှု လက်မှတ် တောင်းယူရန် ကြံရွယ်ကြောင်းကို စာဖြင့် အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ရမည်။”)
(၇) ဒီတော့ “နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့် ရသူဆိုင်ရာ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့” လို့ ခေါ်တဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကို နိုင်ငံသား စိစစ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကြီးကြပ် လုပ်ဆောင်မယ့် အဖွဲ့ဝင်တွေကို ကျွန်တော် အကြံပြု လိုတာက – စနစ်တကျ ဆိုရင် ဒီလို လုပ်သင့်ပါတယ်လို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
လျှောက်ထားသူ ဖိုင်တွဲတစ်ခုကို ကိုင်ပါ။ မိဘ တစ်ဦးဦး နိုင်ငံသား အမျိုးအစား တစ်မျိုးမျိုး ဖြစ်တာ သေချာသလား (အတု မဟုတ်တဲ့ ကတ်ပြားတွေ အမှန်တကယ် ရှိသလား) ကြည့်ပါ။ ဟုတ်တယ်၊ သေချာတယ် ဆိုရင် ပြုနိုင်ငံသားတော့ စဉ်းစားပေးလို့ ရတယ်။ နိုင်ငံသား၊ ဧည့်နိုင်ငံသားတော့ စဉ်းစားပေးဖို့ မလိုတော့ဘူး။
မိဘ တစ်ဦးဦးဟာ နိုင်ငံသား အမျိုးအစား တစ်မျိုးမျိုး ဟုတ်မနေဘူး ဆိုရင် ၄၈ ဥပဒေအရ လျှောက်ထားရန် ကျန်ရှိကြောင်း အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ (ဆိုလိုတာက ပြုနိုင်ငံသား လျှောက်ဖို့ ကြံရွယ်ကြောင်းကို စာပို့ထားတာ တစ်နှစ်နဲ့ ငါးနှစ်ကြားမှာ ရှိနေကြောင်း ခိုင်လုံ အထောက်အထားများနဲ့) လျှောက်တာလား ကြည့်ပါ။ အဲသလို ဟုတ်နေရင် ထည့်သွင်း စဉ်းစားပေးလို့ ရပါတယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ နိဋ္ဌိ တံပါပြီ။ အမှုဖိုင်ကို အသာလေးပိတ်ပြီး ဘေးဖယ်လိုက်ပါ။ စဉ်းစားစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
(၈) အထက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းအတိုင်း မဟုတ်ဘဲ အမေရိကန်ကို ဘာပဲ အလိုက်ပေးလို့ ပေါင်းရပေါင်းရ ပေါင်းသင်းချင်ဇော လွန်နေတာက တစ်မျိုး၊ တူရကီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မျက်နှာကို ပြေးမြင်ပြီး OIC နဲ့လည်း မျက်နှာ မပျက်ဖို့ လိုတယ်လေ ဆိုပြီး အားနာတာက တစ်ဖုံ၊ နည်းလမ်း မညီညွတ်ဘဲ နိုင်ငံသား၊ ပြုနိုင်ငံသားပေးဖို့ လုပ်ကြတယ် ဆိုရင်တော့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ရောင်းစားကြတာပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
(၉) တမြန်နေ့ (၁၅-၀၆-၂၀၁၆) ရက် နေ့ရက်စွဲပါ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပု လက်မှတ်နဲ့ ထုတ်ပြန်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက် အမှတ် (၆၆/၂၀၁၆)အားဖြင့် ပြည်နယ် အဆင့်နဲ့ မြို့နယ်အဆင့် “နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသား ပြုခွင့်ရသူ ဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့” တွေကို ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ကြောင်း ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်တာကို ကြားသိရပါတယ်။ အဲဒီ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့တွေမှာ ဒေသခံ လူထုကို ကိုယ်စားပြုနိုင်တဲ့သဘော ရှိသူတွေ ပါနိုင်အောင် မြို့မိ မြို့ဖ (ဒါမှမဟုတ်) လူထုက တစ်နည်းနည်းဖြင့် ရွေးချယ်ပေးသူ နှစ်ဦးစီကို အရင်တုန်းက ထည့်သွင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ အခု သိရှိရတဲ့ ဒီညွှန်ကြားချက်မှာ မြို့မိ မြို့ဖ နှစ်ဦးအစား “ဌာနဆိုင်ရာ အများကြည်ညို လေးစားခြင်း ခံရသူ နှစ်ဦး” လို့ ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ စကား အသွားအလာအရ အများကြည်ညို လေးစားခြင်းကို ခံရစေဦးတော့ ဌာနဆိုင်ရာတွေက မကြိုက်ရင် အဖွဲ့ထဲမှာ တာဝန်ပေးလို့ မရဘူး ဆိုတဲ့သဘော ဖြစ်နေတယ်။ အမိန့် နာခံနေရသူတွေ မဟုတ်တဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သဘောထားပေးနိုင်သူ တစ်ယောက်မှ မပါနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ အစီအမံ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဒီအစီအမံဟာ လုံးဝ မဖြစ်သင့်ကြောင်းကို ပြည်သူလူထုက ကိုယ်စားပြု ပြောဆိုခွင့် ပေးထားသော နိုင်ငံရေးသမား တစ်ဦး အနေဖြင့် မိမိက ကန့်ကွက်ပါတယ်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ထဲမှာ မြို့လူထုက တစ်နည်းနည်းဖြင့် ရွေးချယ်ပေးထားတဲ့သူ အစိုးရ ဌာနဆိုင်ရာက ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း၊ ကြည်ညိုလေးစားခြင်းကို ရတယ်၊ မရဘူး ရယ်လို့ ပြောနေစရာ မလိုသူ နှစ်ဦးကို အရင်အတိုင်းပဲ ထည့်သွင်းပေးစေလိုကြောင်းကို တိုက်တွန်းပါတယ်။
ဥပဒေ အဟောင်းကို ဖျက်ပြီး အသစ် ဘာကြောင့် ပြုခဲ့ကြရသလဲ
တည်ဆဲ ဥပဒေဖြစ်တဲ့ ၁၉၈၂-ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဥပဒေကို တိတိကျကျ ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် မတိမ်းမစောင်း သုံးစွဲကြဖို့ ဘာကြောင့် တိုက်တွန်းနေရသလဲ ဆိုတာကို ပိုမို ထင်လင်း သိသာ စေနိုင်ဖို့ရာ ၁၉၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေ ရေးဆွဲစဉ် ကာလ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လက ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ “နိုင်ငံသား ဥပဒေကြမ်း ရေးဆွဲရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းရေးနှင့် အကြံဉာဏ် တောင်းခံရေးအဖွဲ့ အဆင့်ဆင့်အတွက် လက်စွဲစာတမ်း” ထဲမှာ အရင် ၁၉၄၈ ဥပဒေဟောင်းကို မသုံးတော့ဘဲ ဖျက်သိမ်းဖို့ရာ ဖြစ်လာရတဲ့ အကြောင်း တစ်ချက်ကို ဒီမှာ ပြန်လည် ဖော်ပြလိုပါတယ်။ ထိုစဉ်က နိုင်ငံတော် သမ္မတရဲ့ မှတ်ချက်စကား ဖြစ်ပါတယ်။ “ဥပဒေဟောင်းအတိုင်း ဘိုးဘွား လေးဦးအနက် တစ်ဦးသည် မြန်မာဖြစ်လျှင် (မြေး)ကို တိုင်းရင်းသား အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုမည် ဆိုပါက အဆုံးမသတ်နိုင်သည့် အခွင့်အရေး တစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ဖန် ဘိုးဘွားလေးဦး စလုံး နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်သည့်တိုင်အောင် နှစ်အပိုင်းအခြားဖြင့် သားစဉ်မြေးဆက် သုံးဆက် ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ ထိုအချိန်က လွတ်လပ်ရေး ရရှိဖို့ ကြိုးပမ်းနေချိန် ဖြစ်၍ လိုက်လျောပေးခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခု အချိန်တွင် ယင်းအချက်ကို ဆက်လက် ထားရှိရန် မလိုတော့ကြောင်း” မှတ်ချက်ပေး လမ်းညွှန်ခဲ့တာကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြောချင်တာက ဒီလောက် အရေးကြီးတဲ့ ဥပဒေ တစ်ရပ်မှာ ဒီလောက်ထိကို အပေါက်ကြီး ဟောင်းလောင်း ဒိုးယိုပေါက် ပွင့်နေတာကြီးကို အပြီးပိတ်ကာ ဥပဒေအသစ် ပြုသင့်တယ် ဆိုပြီး ၈၂ ဥပဒေကို ပြုခဲ့ကြတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်ကို ရောက်တော့မှပဲ ၈၂ ဥပဒေ စာအုပ်ကို လူမမြင်အောင် အသာလေးပိတ်ပြီး အရင် ဥပဒေအဟောင်း ၄၈ ဥပဒေ စာအုပ်ကို မဆီမဆိုင် ဖွင့်ပြီးတော့ နိုင်ငံသား ပေးနိုင်ဖို့ ကြံတာကို တွေ့ရတဲ့အတွက်၊ အံ့ရော . . . အံ့ရောလို့ပဲ မြည်တမ်းရတော့မလား မသိတော့ပါဘူး။
နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာ အာဏာဟာ နိုင်ငံသားတွေဆီက ဆင်းသက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံသား မဖြစ်သင့်သူတွေ နိုင်ငံသား ဖြစ်လာတဲ့ အခါ မိမိတို့ နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အချာ အာဏာဟာ ထိပါးယိုယွင်းခြင်း ခံရပါတယ်။ နိုင်ငံသား မဖြစ်သင့်သူတွေ နိုင်ငံသား ဖြစ်လာရုံမက အဲဒီ လူတွေဟာ နံဘေးကပ်လျက် လူဦးရေ မိမိတို့ထက် သုံးဆမက များပြီး လူဦးရေ ပေါက်ကွဲနေတဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံက နိုင်ငံသားတွေနဲ့ လူမျိုး တစ်မျိုးတည်း (နီးကပါး) ဖြစ်နေတဲ့ အခါ ဒီလူတွေဟာ အရေအတွက်အားဖြင့် တစ်သန်းတည်းပါပဲ ဆိုတာထက် အများကြီး အဓိပ္ပာယ် ဆောင်ပါတယ်။ အနှေးနဲ့ အမြန် ဆိုသလို နိုင်ငံကျဆုံးခန်း ဆိုက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ အလားအလာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ညီအစ်ကိုချင်း စကားများတတ် ရန်ဖြစ်တတ်ကြတာက လက်သီးနဲ့ ထိုးချင် ထိုးတတ်ကြတာက သဘာဝ ဖြစ်ပေမယ့် အိမ်ကို ခိုးသူတွေ ချိုးဖောက်ဝင်ရောက် လာတဲ့ အခါကျရင် ညီအစ်ကိုတွေအားလုံး လှံဆွဲ ရင်ဆိုင်ပြီး မိမိတို့ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အသက်ကို သာမက မိမိတို့ရဲ့ အိုးအိမ်၊ အစ်မ နှမ၊ မိခင် ဖခင်တို့ကို ၀ိုင်းဝန်း ကာကွယ် ကြရပါကြောင်း . . . ပြည်ထောင်စုသား အားလုံးတို့အား သတင်းစကား ပို့သ အပ်ပါတယ်။
Daily Eleven သတင်းစာ
၂၀၁၆-ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၆) ရက် ၊ တနင်္ဂနွေနေ့
ကတျပွားတှေ ထုတျပေးမှုဟာ နညျးဥပဒတှေနေဲ့ မညီညှတျတာကို အရငျကတညျးက တှရေ့ဖူးတယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ White Card ချေါ အဖွူရောငျ ကတျပွားဟာ ပွဋ်ဌာနျး နညျးဥပဒေ လုပျထုံးလုပျနညျးမြားအရ ဆိုရငျ နိုငျငံသား စိစဈရေး ပနျးရောငျကတျပွား ကိုငျဆောငျသူ နိုငျငံသား တဈဦးဦး သူ့ရဲ့ ပနျးရောငျကတျ ပကျြစီး ပြောကျဆုံးနစေဉျ ကာလမှာ ယာယီသုံးဖို့ ထုတျပေးနိုငျတယျလို့ ပွဋ်ဌာနျးထားတဲ့ ကတျအမြိုးအစား ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဖွူရောငျကတျကို နိုငျငံသား ဟုတျမဟုတျ မသိရသေးတဲ့ ဘင်ျဂါလီတှကေို (လုပျထုံးလုပျနညျးနဲ့ ညီညှတျခွငျး မရှိဘဲ) ထုတျပေးခဲ့ကွတယျ။ ဒီလိုမြိုး ထုတျပေးလို့ ရတယျ ဆိုပွီးတော့ လဝက တာဝနျရှိသူတှဟော ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ တရားဝငျ ထုတျဖျော ပွောခဲ့ကွတယျ။
နိုငျငံသား၊ ဧညျ့နိုငျငံသားနဲ့ ပွုနိုငျငံသား ကတျပွားတှကေို (ကတျပွား အစဈတှကေို) နညျးလမျး ညီညှတျခွငျး မရှိဘဲ မွနျမာနိုငျငံ တဈဝနျးမှာ သိနျးခြီလို့ ထုတျပေးခဲ့ကွပွီးပွီ။ လဝက အောကျခွဝေနျထမျးမှ အစ ဝနျကွီးအထိ ဘယျသူမှ တရားစှဲဆို ခံရခွငျး ထောငျကခြွငျး မရှိသေးဘူး။ ၁၉၈၂ ခုနှဈ နိုငျငံသား ဥပဒေ ပုဒျမ ၁၉ နဲ့ တရားစှဲဆိုခွငျး ခံရတာဟာ … ကြှနျတျော သိသလောကျ ကော့သောငျးမှာ ဖမျးမိတဲ့ ဘင်ျဂါလီတှေ အမှုမှာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးက လဝက ဝနျထမျး နှဈဦးကို အမှုနဲ့ ဆကျစပျပွီးတော့ တရားစှဲတာဟာ ပထမဦးဆုံး အကွိမျ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့မို့လို့ အစိမျးရောငျ ကတျပွားဟာ ဥပဒေ နညျးဥပဒေ လုပျထုံး လုပျနညျးမြားနဲ့ ညီညှတျမှု ရှိ မရှိကို အသအေခြာ သုံးသပျကွဖို့ လိုအပျပါတယျ။
ဥပဒကေ လုံပမေယျ့ ခေါငျမိုးက မလုံရငျ
၁၉၈၂-ခုနှဈ နိုငျငံသား ဥပဒဟော မွနျမာနိုငျငံ ရရှေညျ တညျတံ့ရေးကို ရညျမှနျးပွီး လူထု လူတနျးစား အသီးသီးရဲ့ ပါဝငျ အကွံပွုခကျြတှနေဲ့ အခြိနျယူ ရေးဆှဲ ပွဋ်ဌာနျးခဲ့တဲ့ ဥပဒေ ဖွဈတဲ့အတှကျ ယိုပေါကျတှေ ဟာကှကျတှေ လှတျပေါကျတှေ ရှိနိုငျခွေ အငျမတနျ နညျးကွောငျး ရှကေ့ တငျပွ ရေးသားခဲ့ပွီးပါပွီ။ ဥပဒကေို ကိုငျတှယျ သုံးစှဲတဲ့ လူတှကေသာ ဖောကျခွငျး ဖွဈကွောငျးကိုလညျး ထညျ့သှငျး ရေးသားခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တဈဘကျမှာ လှတျပေါကျနှဈရပျ ရှိနသေေးကွောငျးကိုလညျး စိတျမကောငျးစှာနဲ့ပဲ ထညျ့ပွောရပါဦးမယျ။ အခု ဆကျဆှေးနှေးမယျ့ ဖျောပွပါ အခကျြတှကေတော့ ခေါငျမိုး လုံ မလုံနဲ့ အဓိက ပတျသကျပါတယျ။
လှတျပေါကျ တဈ – ၁၉၈၂ ခုနှဈ နိုငျငံသား ဥပဒေ ပုဒျမ ၈ (က)
၈၂ ဥပဒေ ပုဒျမ ၈ (မူရငျး) စာသားက ဒီလို ဆိုပါတယျ။ “နိုငျငံတျော ကောငျစီသညျ နိုငျငံတျော၏ အကြိုးငှာ မညျသူ့ကို မဆို နိုငျငံသား သို့မဟုတျ ဧညျ့နိုငျငံသား သို့မဟုတျ နိုငျငံသားပွုခှငျ့ ရသူအဖွဈ သတျမှတျနိုငျသညျ” လို့ ဆိုတားပါတယျ။ (စကားရပျ အစားထိုးပွီးသား Update လုပျပွီးသား စာသားကတော့ ‘နိုငျငံတျော သမ်မတ (သို့မဟုတျ) ပွညျထောငျစု အစိုးရ အဖှဲ့’ သညျ နိုငျငံတျော၏ အကြိုးငှာ မညျသူ့ကို မဆို နိုငျငံသား သို့မဟုတျ ဧညျ့နိုငျငံသား သို့မဟုတျ နိုငျငံသား ပွုခှငျ့ရသူ အဖွဈ သတျမှတျနိုငျသညျ’ လို့ ဆိုပါတယျ။
ဒါကို အဆိုးဆုံး အခွအေနေ လှမျးမြှျောပွီး တှေးကွညျ့လိုကျမိတဲ့ အခါ မိမိတို့ နိုငျငံကို အုပျခြုပျနတေဲ့ အစိုးရက တိုငျးပွညျနဲ့ လူမြိုးအပျေါ သစ်စာ မရှိခဲ့ရငျ ‘မညျသူ့ကို မဆို’ နိုငျငံသား တဈမြိုးမြိုး သတျမှတျပေးနိုငျတယျ ဆိုတဲ့ ဒီပုဒျမကို အလှဲသုံးစား လုပျလာနိုငျတယျ။ ဒီဥပဒရေဲ့ အခွား နရောတှမှော ဘယျလိုပဲ ပွဋ်ဌာနျးထားထား ဒီနိုငျငံကို အုပျခြုပျခှငျ့ ရထားတဲ့ အစိုးရမငျးကသာ ‘နိုငျငံတျော၏ အကြိုး’ ရှိပါတယျလို့ တဈနညျးနညျးနဲ့ ပွောပွီး ‘မညျသူ့ကို မဆို’ နိုငျငံသား တဈမြိုးမြိုးပေးတာ လုပျသှားနိုငျတယျ။ ဒါဟာ လှတျပေါကျ (Loophole) တဈခု အနနေဲ့ ရှိနတေယျ။
လှတျပေါကျ နှဈ – ၁၉၈၂ ခုနှဈ နိုငျငံသား ဥပဒေ ပုဒျမ ၇၅
၈၂ ဥပဒေ ပုဒျမ-၇၅ (မူရငျး)စာသားက ဒီလို ဆိုပါတယျ။ ‘ဤဥပဒပေါ ပွဋ်ဌာနျးခကျြမြားကို ဆောငျရှကျနိုငျရနျ အလို့ငှာ (အစိုးရအဖှဲ့)သညျ လိုအပျသော လုပျထုံး လုပျနညျးမြားကို နိုငျငံတျော ကောငျစီ၏ သဘောတူညီခကျြဖွငျ့ ထုတျပွနျရမညျ’ လို့ ဆိုထားပါတယျ။ (စကားရပျ အစားထိုးပွီးသား update လုပျပွီးသား စာသားကတော့ ‘ဤဥပဒပေါ ပွဋ်ဌာနျးခကျြမြားကို ဆောငျရှကျနိုငျရနျ အလို့ငှာ ပွညျထောငျစု အစိုးရ အဖှဲ့သညျ လိုအပျသော လုပျထုံးလုပျနညျးမြားကို နိုငျငံတျော သမ်မတ (သို့မဟုတျ) ပွညျထောငျစု အစိုးရ အဖှဲ့၏ သဘောတူညီခကျြဖွငျ့ ထုတျပွနျရမညျ’ လို့ ဆိုပါတယျ။) ၈၂ ဥပဒေ ပုဒျမ-၇၅ အရ အပျနှငျးထားတဲ့ လုပျပိုငျခှငျ့တှကေို ကငျြ့သုံးပွီး သကာလ ထိုစဉျက ဝနျကွီးအဖှဲ့ဟာ နိုငျငံတျော ကောငျစီရဲ့ သဘောတူညီခကျြနဲ့ ‘မွနျမာနိုငျငံသား ဥပဒဆေိုငျရာ လုပျထုံးလုပျနညျးမြား’ ကို အမိနျ့ကွငွောစာ အမှတျ ၁၃/၈၃ အားဖွငျ့ (၁၀-၀၉-၁၉၈၃) ရကျနမှေ့ာ တဈဆကျတညျး ပွဋ်ဌာနျးထားခဲ့ပွီး ဖွဈတယျ။
ဒါပမေဲ့ ရှကေ့ ခိုငျခိုငျမာမာ ဘယျလိုပဲ ပွဋ်ဌာနျးထား ပွဋ်ဌာနျးထား ဥပဒကေို ယိုပေါကျတှေ ဖနျတီးပေးနိုငျမယျ့ လုပျထုံးလုပျနညျးတှကေို ရေးဆှဲ ပွဋ်ဌာနျးလာခဲ့ရငျ . . . တိုငျးပွညျရဲ့ အခြုပျအခွာ အာဏာနဲ့ အမြိုးဘာသာ သာသနာကတော့ ရစေုံမြောရမယျ့ အခွအေနေ ဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။
၈၂ ဥပဒနေဲ့ စိစဈမှုကို လုပျဆောငျဖို့ရာကို အဆိုတငျနိုငျဖို့အတှကျ မကွာခငျက ပွညျသူ့ လှတျတျောမှာ ကွိုးပမျးကွတဲ့အခါ အဆို တငျသငျ့ကွောငျး ဆှေးနှေးတဲ့ အမတျတှေ ဆှေးနှေး အပွီးမှာ ပါတီကွီး တဈခုရဲ့ အမတျတှေ ဘယျသူမှ လကျခုပျ မတီးကွတာဟာ ဘယျဘကျကို ဦးတညျနသေလဲ ဆိုတာ တှေးတော စဉျးစားစရာ ဖွဈနပေါတယျ။
တိုငျးရငျးသား အရေးမှာ ရှမျးက ဦးဆောငျနလေေ့ ရှိခဲ့ရာကနေ ယနေ့ အခြိနျအခါမှာ မွပေျေါနိုငျငံရေးမှာ ရှမျးနဲ့ တနျးတူ ရငျဘောငျတနျး ဦးဆောငျလာတဲ့ ရခိုငျကို နိုငျငံရေး အားသာခကျြတှေ မရနိုငျအောငျ နှိပျကှပျထားနိုငျမှ ဖွဈမယျ ဆိုတာမြိုး၊ ရခိုငျကို ကုလားနဲ့ ကစားထားမှ ဖွဈမယျ ကုလားနဲ့ ညှပျထားမှ ဒီကောငျတှေ ကွပျနမေယျလို့ စဉျစားပုံမြိုးကို အရငျ အစိုးရ အဆကျဆကျဆီက အမှဆေကျခံ ထားမိတယျ ဆိုခဲ့ရငျ . . . ဒီ ဘင်ျဂါလီ အရေးဟာ ဒီလို ကစားရငျး ကစားရငျးနဲ့ ကွီးထှားလာခဲ့တာဟာ (ပွညျထောငျစု အဆငျ့) မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးရဲ့ နောငျရေး ရငျမအေးစရာ ဖွဈလာနပွေီဆိုတဲ့ အခကျြကိုလညျး နှလုံးသှငျးပေးကွဖို့ ပနျကွားလိုပါတယျ။ ဖဆပလ မဲနိုငျဖို့အတှကျ ချေါတော ကုလားတှကေို သမ်ဗာနျ အစီးပေါငျး ဆယျခြီ ရာခြီတိုကျ နတျမွဈကို ကြျောသှငျးပွီး မဲပေးစခေဲ့တာ . . . ၊ စဈအစိုးရ လကျထကျ ထောကျလှမျးရေး ကွီးစိုးစဉျ ရခိုငျတှကေို ပွားပွားဝပျအောငျ နှိပျကှပျပွီး ကုလား လုပျငနျးရှငျတှကေို ဖှံ့ဖွိုး ကွီးထှားအောငျ မွတေောငျ မွှောကျပေးခဲ့တာ . . . ၊ ကွံ့ခိုငျရေးပါတီ မဲရဖို့အတှကျ ဘူးသီးတောငျ မောငျတောမှာ အဖွူရောငျကတျတှေ ထုတျပေးပွီး မဲပေးခှငျ့ ပွုခဲ့တာ . . . ၊ စသညျဖွငျ့ စသညျဖွငျ့ . . . ဒီလိုမြိုး လုပျရပျတှေ မူဝါဒတှေ ခဉျြးကပျ စဉျးစားမှုတှဟော ဒီဘကျမှာ ပါမလာတော့ဖို့ကို ကြှနျတျောတို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။
အာမားရျရှိုနား မိုငျယနျမား။ ကြှနျုပျ၏ မွနျမာ ရှနေိုငျငံ
ပွီးခဲ့တဲ့ ဇှနျလ (၇) ရကျ (၀၇-၀၆-၂၀၁၆) ရကျနကေ့ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျ ကာဒီ (ဘင်ျဂါလီ) ရှာကို လဝက တာဝနျရှိသူတှေ သှားရောကျပွီး နိုငျငံသား စိစဈရေး လုပျငနျး အဆငျ့တှေ လုပျဆောငျနိုငျဖို့ သှားရောကျခဲ့ကွပမေယျ့ စိစဈ လုပျဆောငျတဲ့ နရောမှာ လူမြိုး/ဘာသာ အခကျြအလကျတှကေို မေးမွနျး ထညျ့သှငျးခွငျး မပါရှိတဲ့အတှကျ ကာဒီ ရှာသား ဘင်ျဂါလီ လူမြိုးတှကေ နိုငျငံသား စိစဈရေး ဖွဈစဉျ မလုပျနိုငျကွောငျး ငွငျးပယျခဲ့တယျ။ အစဈခံမယျ့ လူတှကေ ငွငျးပယျတဲ့အတှကျ စဈဆေးရမယျ့ တာဝနျရှိတဲ့သူတှေ ဘာမှ မလုပျနိုငျဘဲ ပွနျလာခဲ့ကွရတယျ။
မိမိ သိသလောကျ နိုငျငံတျော သမ်မတနဲ့ ဒုသမ်မတတှဟော တိုငျးရငျးသားတှေ ဖွဈကွရမယျ ဆိုတဲ့ အခကျြက လှဲပွီး မညျသညျ့ နိုငျငံသား မဆို (တိုငျးရငျးသား ဟုတျဟုတျ မဟုတျဟုတျ) ဥပဒအေရ ရပိုငျခှငျ့တှေ တနျးတူ အကုနျ ရကွတယျလို့ ပွဋ်ဌာနျးထားတဲ့ သညျ မွနျမာနိုငျငံမှာ နိုငျငံသား ဟုတျ၊ မဟုတျ မသခြောသူ ခိုးဝငျတှလေို့ သံသယရှိခွငျး ခံရသူ လူအုပျစု တဈစုဟာ နိုငျငံသား စိစဈရေးကို လုပျပေးပါမယျ ဆိုပွီး အိမျတိုငျရာရောကျ လာလုပျပေးတာကို လူမြိုး/ဘာသာ အခကျြအလကျ မပါလို့ နိုငျငံသား စိစဈမှု ဖွဈစဉျကို ငွငျးပယျတယျ ဆိုတာကို ကွညျ့လိုကျလြှငျ မွငျသာနတေဲ့ အခကျြတဈခကျြ ပျေါလာပါတယျ။ သူတို့ အတှကျ နိုငျငံသားဖွဈမှု ဆိုတာ အရေးကွီးရငျ ကွီးမယျ၊ ဒါနဲ့ ထပျတူ (သို့မဟုတျ) ဒါထကျ အရေးကွီးတာကတော့ သူတို့ရဲ့ လူမြိုးနဲ့ ဘာသာ identity ဖွဈပါတယျ။ သူတို့အတှကျ လူမြိုးဘာသာက ဘာကွောငျ့ အရေးကွီးရသလဲ။
သူတို့အတှကျ လူမြိုး ဘာသာက ဘာကွောငျ့ အရေးကွီးရသလဲ ဆိုတော့ လူမြိုး ဘာသာကို အခွခေံပွီး ထပျဆငျ့ ရလာနိုငျတဲ့ တိုငျးရငျးသား အခှငျ့အရေး၊ (တဈယောကျခငျြး မဟုတျတဲ့ အစုအဖှဲ့အလိုကျ) နိုငျငံရေး ရပိုငျခှငျ့၊ နယျမွေ ပိုငျစိုးခှငျ့၊ နယျမွအေလိုကျ ကိုယျပိုငျ အုပျခြုပျခှငျ့ အစရှိတဲ့ နိုငျငံရေး ရညျမှနျးခကျြတှကေို လှမျးမြှျောကွညျ့နကွေပွီးသား ဖွဈနကွေလို့ ဖွဈပါတယျ။
လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး(၂၀)ကြျော ကြှနျတျော ပွညျဂြီတီအိုငျမှာ တကျနစေဉျ ကာလကလို့ ထငျပါတယျ။ ပွညျမွို့ထဲမှာ သှားလာနတေုံး မိုးရှာတာနဲ့ ထီးမပါတော့ နီးရာ လကျဖကျရညျဆိုငျ တဈဆိုငျမှာ ဝငျထိုငျရပါတယျ။ ဘင်ျဂါလီဆိုငျ တဈဆိုငျ ဖွဈနပေါတယျ။ ဖွဈခငျြတော့ အဲသညျ အခြိနျမှာ မွနျမာနဲ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့တို့ ကနျတဲ့ပှဲ တီဗှီမှာ လာနတေယျ။ (ဘယျဖလား ဘာပှဲစဉျလဲ ဆိုတာကိုတော့ အမှတျတမဲ့ပါပဲ။) ဆိုငျရှငျ မိသားစုနဲ့ သူနဲ့ မြိုးနှယျတူသူတှေ အားလုံးက ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ဘကျက အသညျးအသနျ အားပေးနကွေတယျ။ မွနျမာ ဂိုးသမားက ဘာလုပျလိုကျပွနျပွီ၊ ညဈလိုကျပွနျပွီ၊ ဘာညာ စသညျဖွငျ့ သူတို့ပါးစပျက ပွောကွ ဆိုကွ တောကျတခေါကျခေါကျနဲ့ အားပေးကွ လုပျနကွေခြိနျမှာ ကြှနျတျောနဲ့ အခွား စားသုံးသူတှကေ အသာလေး ငွိမျပွီး ဘာမှ မပွောပဲ တီဗီကိုပဲ ကွညျ့နခေဲ့ကွတယျ။ မှတျမှတျရရပါပဲ။ အဲဒီ ကတညျးက ရငျထဲမှာ မေးခှနျး တဈခု ရှိပါတယျ။ ဘယျသူတှဟော ဘယျနိုငျငံကို သစ်စာခံကွသလဲ၊ ဘယျအလံကို အလေးပွုမလဲ၊ ဘယျနိုငျငံတျော သီခငျြးကို ဆိုကွမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခှနျးပါ။
၁၉၈၂-ခုနှဈ နိုငျငံသား ဥပဒမှော နိုငျငံသားပွုခှငျ့ ရရနျ လြှောကျထားသူရဲ့ အရညျအခငျြးတှထေဲမှာ ‘တိုငျးရငျးသား ဘာသာစကား တဈမြိုးမြိုးကို ကောငျးမှနျစှာ ပွောတတျခွငျး ဆိုတာကို ထညျ့သှငျး ပွဋ်ဌာနျးထားပါတယျ။ အမရေိကနျမှာလညျး နိုငျငံသားလြှောကျတဲ့ သူတဈယောကျဟာ အင်ျဂလိပျ ဘာသာကို မိခငျ ဘာသာစကား အနနေဲ့ ပွောတဲ့သူပငျ ဖွဈစကောမူ (ဥပမာ ကနဒေီယနျတှပေဲ ဖွဈဖွဈပေါ့) ဘာသာစကားပိုငျး စမျးသပျစဈဆေးမှုငယျတဈခုကို ဖွတျသနျးရပါသေးတယျ။ နောကျပွီးတော့ နိုငျငံရဲ့ သမိုငျး၊ နိုငျငံရဲ့ နိုငျငံရေး စနဈ စတာတှနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ မေးခှနျးတှေ မေးလို့ ကနြေပျလောကျတဲ့ အဖွတှေရေမှ အမရေိကနျနိုငျငံသားပွုခှငျ့ ရကွပါတယျ။ အမရေိကနျနိုငျငံသား အဖွဈ ကမျြးကြိနျတဲ့နမှေ့ာ ကမျြးကြိနျပွီးသညျနောကျ အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ နိုငျငံတျော သီခငျြးဖွဈတဲ့ The Star-Spangled Banner ကို သံပွိုငျ သီဆိုကွရပါတယျ။
ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျ ကာဒီ (ဘင်ျဂါလီ) ရှာကို လဝက တာဝနျရှိသူတှဟော နိုငျငံသား စိစဈမှုကို လုပျဆောငျဖို့ သှားရောကျရာမှာ မအောငျမွငျဘဲ ပွနျလာခဲ့ရတဲ့နကေ့ အဲဒီ သတငျးကို ဖတျပွီးတော့ ကြှနျတျော စဉျးစားမိတာ တဈခုရှိတယျ။ လူမြိုးဘာသာ နာမညျ မပါလို့ စာရငျး အကောကျမခံဘူး ဆိုတဲ့ သူတှပေေါ့နျော . . . ဒီလူတှဟော ဒီနိုငျငံရဲ့ နိုငျငံတျော သီခငျြးကို ဆိုမှ ဆိုတတျပါ့မလားလို့ ကြှနျတျော တှေးနမေိတယျ။ ဒီဘကျက နိုငျငံတျောသီခငျြးကို ဆိုဖို့ မသငျဘဲ ဟိုဘကျက နိုငျငံတျော သီခငျြးကို ဆိုဖို့ သငျပေးရငျ သူတို့အတှကျ ပိုတောငျ လှယျဦးမယျလို့ တှေးတောမိပွနျတယျ။ ရာဘငျဒရာနတျတဂိုး ရေးသားခဲ့တဲ့ “အာမားရျရှိုနားဘငျးဂလား (ကြှနျုပျ၏ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ရှနေိုငျငံ)” သီခငျြးက သူတို့အတှကျ ဆိုရ ပိုလှယျနလေိမျ့ဦးမယျ။ ဒါမှမဟုတျ ကြှနျတျောတို့ဘကျက စာရငျးသှားကောကျတဲ့ အရာရှိမငျးမြားကပဲ အဲဒီ ရှာသူရှာသားတို့ အသာတကွညျနဲ့ စာရငျးအကောကျခံ ပေးဖို့ရာ အတှကျ အဲဒီ နိုငျငံတျော သီခငျြးကို မွနျမာနိုငျငံ နာမညျ ထညျ့ဆိုပွရငျကော ဘယျလိုနမေလဲလို့ တှေးတောမိတယျ။
အရငျက မွနျမာနိုငျငံကို နတျမွဈဟို ဘကျခွမျးမှာ ဘျောရျမာလို့ ချေါကွတယျ၊ ကွမာပေါ့။ နောကျပိုငျးကတြော့ မိုငျယနျမာလို့ ချေါကွတယျလို့ ဆိုပါတယျ၊ Myanmar ပေါ့။ အဲဒီတော့ သူတို့အကွိုကျ “အာမားရျရှိုနား ဘျောရျမာ”၊ ဒါမှမဟုတျ “အာမားရျရှိုနား မိုငျယနျမား” (ကြှနျုပျ၏ မွနျမာရှနေိုငျငံ) သီခငျြး အသဈလေးနဲ့မှ ပွလေညျမှာလား စဉျးစားကွပါလကေုနျ။
အမရေိကနျ နိုငျငံတျော သီခငျြး The Star-Spangled Banner ကို မက်ကဆီကနျနှယျဖှား လကျတငျနိုတှေ ဆိုရလှယျအောငျ စပိနျ ဘာသာစကားနဲ့ သီဆိုခှငျ့ပွုဖို့ ၂၀၀၆-ခုနှဈ ဝနျးကငျြလောကျက အာသီသပွုကွတာကို အမရေိကနျ စာရေးသူ Lee Harris ကတော့ ကနျ့ကှကျ ရေးသား ခဲ့ဖူးတယျ။ အရငျအတိုငျးပဲ ကောငျးပါတယျတဲ့..သူက ဆိုတယျ။ ဖိနပျနဲ့ မတျောလို့ ဖနောငျ့ကို မလှီးပါနဲ့လို့ ပွောခငျြတဲ့ သဘောပါ။
ယနေ့ အုပျစိုးသူ အပေါငျးတို့ ခေါငျးစားနကွေတဲ့ “နိုငျငံသား မဖွဈနိုငျသူတှကေို ဘယျလို ရှငျးထုတျမလဲ” နဲ့ “ဒီလူတှေ နိုငျငံသား ဖွဈနိုငျအောငျ တညျဆဲ ဥပဒကေို ဘယျလို အပေါကျဖောကျရမလဲ” ဆိုတဲ့ ခဉျြးကပျမှု နှဈခုကွားက ရှေးခယျြမှု အကပျြအတညျးဟာ ဖိနပျကို လှီးမလား ဖနောငျ့ကို လှီးမလား ဆိုတဲ့ အကပျြအတညျးနဲ့ သဘောခငျြး ခပျဆငျဆငျလို့ ပွောရငျ မှားမယျလို့ မထငျ . . . ။
နိုငျငံသား စိစဈမှု အစဈအမှနျ ဆိုတာ ဒီလိုပါ
၁၉၈၂-ခုနှဈ နိုငျငံသား ဥပဒအေရ – (၁) နိုငျငံသား၊ ဧညျ့နိုငျငံသားနဲ့ နိုငျငံသား ပွုခှငျ့ရသူ ဆိုပွီး သုံးမြိုးသုံးစား ရှိကွောငျး စကားဦး ဖျောပွလိုတယျ။
(၂) ၁၅-၁၀-၁၉၈၂ ရကျနေ့ မတိုငျခငျက ၄၈ ဥပဒေ တညျဆဲကာလက နိုငျငံသား လြှောကျထားပွီးသား သူတှကေိုတောငျ နိုငျငံသား မပေးတော့ဘူး၊ ဖွဈသငျ့တယျ ထငျရငျ ထောငျဧညျ့နိုငျငံသားလို့ပဲ ၈၂ ဥပဒပေုဒျမ ၂၃ အရ သတျမှတျနိုငျတယျလို့ ပွဋ်ဌာနျးထားတယျ။ ဧညျ့နိုငျငံသားလို့ပဲ သတျမှတျပေးခဲ့ကွတယျ။ ဆိုတော့ကာ အခုမှ ၃၄-နှဈ ကွာပွီးခါမှ ဧညျ့နိုငျငံသားထကျ အဆငျ့မွငျ့တဲ့ နိုငျငံသား အဖွဈကို လာလြှောကျနလေို့ မရတော့ဘူး။ ရှငျးရှငျး ပွောရရငျ ဧညျ့နိုငျငံသား အဖွဈကို လြှောကျထားခှငျ့နဲ့ နိုငျငံသား အဖွဈတို့ကို လြှောကျထားခှငျ့တို့ မကနျြတော့ဘူး။ နိုငျငံသားပွုခှငျ့ရသူ အဖွဈကိုပဲ လြှောကျထားနိုငျတော့မှာ ဖွဈတယျ။ (ရညျညှနျးခကျြ တဈ၊ ၈၂ ဥပဒေ ပုဒျမ ၂၃။ “၁၉၄၈- ခုနှဈ၊ ပွညျထောငျစု မွနျမာနိုငျငံသား ဖွဈမှု အကျဥပဒေ အရ နိုငျငံသား ဖွဈရနျ လြှောကျထားသူမြားသညျ သတျမှတျခကျြမြားနှငျ့ အရညျအခငျြးမြား ကိုကျညီပါက ဧညျ့နိုငျငံသား အဖွဈ ဗဟို အဖှဲ့က သတျမှတျနိုငျသညျ”) (ရညျညှနျးခကျြ နှဈ၊ မွနျမာနိုငျငံသား ဥပဒဆေိုငျရာ လုပျထုံးလုပျနညျးမြား အပိုဒျ ၂၅ (ခ)။ “ဥပဒေ အာဏာ တညျသညျ့ ၁၉၈၂-ခုနှဈ အောကျတိုဘာလ ၁၅ ရကျနေ့ နောကျပိုငျးတှငျ ဥပဒေ ပုဒျမ ၈ ပုဒျမခှဲ (က) ပါ ပွဋ်ဌာနျးခကျြအရမှ အပ နိုငျငံခွားသား တဈဦးသညျ မညျသညျ့နညျးနှငျ့မြှ နိုငျငံသား အဖွဈကို ရရှိမညျ မဟုတျပါ”)
(၃) ဒါတငျ မကဘူး၊ နိုငျငံခွားသားတှေ (နိုငျငံခွားသား ဖွဈကွောငျး သခြောနသေူတှဟော) နိုငျငံသား ပွုခှငျ့ရသူ အဖွဈကိုတောငျ လြှောကျထားခှငျ့ မရှိဘူး။ (ရညျညှနျးခကျြ၊ ၈၂ ဥပဒေ ပုဒျမ ၇၂။ “ဤဥပဒေ အာဏာ တညျသညျ့နမှေ့ စ၍ ဤဥပဒပေါ ပွဋ်ဌာနျးခကျြ တဈရပျရပျ အရမှ အပ မညျသညျ့ နိုငျငံခွားသားမြှ နိုငျငံသားပွုခှငျ့ ရရနျ လြှောကျထားခှငျ့ မရှိစရေ”)
(၄) အနညျးဆုံး မိဘ တဈဦးဦးဟာ နိုငျငံသား အမြိုးအစား တဈမြိုးမြိုး (နိုငျငံသား၊ ဧညျ့နိုငျငံသား၊ ပွုနိုငျငံသား) ဖွဈသူတှမှေသာလြှငျ နိုငျငံသား ပွုခှငျ့ရသူ (ပွုနိုငျငံသား) အဖွဈကို လြှောကျထားနိုငျတယျ။ နိုငျငံတကာ ဖိအားပေးတာကို မွနျမာနိုငျငံက ခံရတဲ့ အတှကျကွောငျ့ မို့လို့ အမိ သို့မဟုတျ အဘ တဈဦးဦးတောငျ ဘာမှ မဟုတျတဲ့ သူတှကေို နိုငျငံသား ပွုခှငျ့ရသူ အဖွဈ လြှောကျထားခှငျ့ ပေးလိုကျပါကှာ ဆိုတာမြိုးကို ၈၂ ဥပဒကေ ပွဋ်ဌာနျး ပေးမထားဘူး။ (ရညျညှနျးခကျြ၊ ၈၂ ဥပဒေ ပုဒျမ ၄၃ အား အကယျြ ဖတျပါရနျ။)
(၅) ဒီလိုမြိုး မဟုတျရငျလညျး အရငျ ဥပဒေ အဟောငျး (၄၈ ဥပဒေ) အရ လြှောကျထားဖို့ ကနျြရှိနသေေးပါတယျ ခငျဗြ ဆိုပွီးတော့ “ခိုငျလုံသော သကျသေ အထောကျအထားမြားဖွငျ့” ပွုနိုငျငံသား ဖွဈခှငျ့ ရရှိရေးကို လြှောကျထားနိုငျတယျ။ (ရညျညှနျးခကျြ၊ ၈၂ ဥပဒေ ပုဒျမ ၄၂။ “၁၉၄၈-ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ ၄ ရကျနေ့ မတိုငျမီ ကာလတှငျ နိုငျငံတျော အတှငျး၌ ရောကျရှိ နထေိုငျသူနှငျ့ ထိုသူတို့မှ နိုငျငံတျောအတှငျး မှေးဖှားသညျ့ သားသမီးသညျ ၁၉၄၈-ခုနှဈ ပွညျထောငျစု မွနျမာနိုငျငံသားဖွဈမှု အကျဥပဒအေရ လြှောကျထားရနျ ကနျြရှိနကွေောငျး ခိုငျလုံသော အထောကျအထားမြားဖွငျ့ ဗဟို အဖှဲ့သို့ နိုငျငံသားပွုခှငျ့ ရရနျ လြှောကျထားနိုငျသညျ။”)
(၆) အထကျက ပွောသလို ၄၈ ဥပဒအေရ လြှောကျဖို့ ကနျြနခေဲ့ပါတယျ ဆိုတာကို ခိုငျခိုငျလုံလုံ တငျပွမယျ ဆိုလညျး အဲဒီ ၄၈ ဥပဒမှော ဖျောပွထားတာက – မလြှောကျထားခငျမှာ လြှောကျထားဖို့ ကွံရှယျပါတယျ ဆိုတာကို အကွောငျးကွား ထားခဲ့တာဟာ တဈနှဈကနေ ငါးနှဈအတှငျး ကာလမှာ ရှိနရေပါမယျ။ လြှောကျမယျလို့တော့ စိတျထဲက ကွံခဲ့ဖူးတာပဲလို့ လာရှီးလို့ မရပါဘူး။ (ရညျညှနျးခကျြ၊ ၄၈ ဥပဒေ ၇ (၁) (ဃ) “. . . သို့ရာတှငျ ထိုသူသညျ နိုငျငံသားပွုမှု လကျမှတျ ရလိုကွောငျး မလြှောကျထားမီ တဈနှဈထကျ မနညျး ငါးနှဈထကျ မမြား ကွိုတငျ၍ ဤအကျဥပဒအေရ ပွဋ်ဌာနျးထားသော နညျးဥပဒမြေား၌ ပါရှိသညျ့ ပုံစံအတိုငျး နိုငျငံသားပွုမှု လကျမှတျ တောငျးယူရနျ ကွံရှယျကွောငျးကို စာဖွငျ့ အကွောငျးကွားထားပွီး ဖွဈရမညျ။”)
(၇) ဒီတော့ “နိုငျငံသား သို့မဟုတျ နိုငျငံသားပွုခှငျ့ ရသူဆိုငျရာ စုံစမျး စဈဆေးရေး အဖှဲ့” လို့ ချေါတဲ့ ဘင်ျဂါလီတှကေို နိုငျငံသား စိစဈတဲ့ လုပျငနျးစဉျကို ကွီးကွပျ လုပျဆောငျမယျ့ အဖှဲ့ဝငျတှကေို ကြှနျတျော အကွံပွု လိုတာက – စနဈတကြ ဆိုရငျ ဒီလို လုပျသငျ့ပါတယျလို့ အကွံပွုလိုပါတယျ။
လြှောကျထားသူ ဖိုငျတှဲတဈခုကို ကိုငျပါ။ မိဘ တဈဦးဦး နိုငျငံသား အမြိုးအစား တဈမြိုးမြိုး ဖွဈတာ သခြောသလား (အတု မဟုတျတဲ့ ကတျပွားတှေ အမှနျတကယျ ရှိသလား) ကွညျ့ပါ။ ဟုတျတယျ၊ သခြောတယျ ဆိုရငျ ပွုနိုငျငံသားတော့ စဉျးစားပေးလို့ ရတယျ။ နိုငျငံသား၊ ဧညျ့နိုငျငံသားတော့ စဉျးစားပေးဖို့ မလိုတော့ဘူး။
မိဘ တဈဦးဦးဟာ နိုငျငံသား အမြိုးအစား တဈမြိုးမြိုး ဟုတျမနဘေူး ဆိုရငျ ၄၈ ဥပဒအေရ လြှောကျထားရနျ ကနျြရှိကွောငျး အထောကျအထား ခိုငျခိုငျလုံလုံနဲ့ (ဆိုလိုတာက ပွုနိုငျငံသား လြှောကျဖို့ ကွံရှယျကွောငျးကို စာပို့ထားတာ တဈနှဈနဲ့ ငါးနှဈကွားမှာ ရှိနကွေောငျး ခိုငျလုံ အထောကျအထားမြားနဲ့) လြှောကျတာလား ကွညျ့ပါ။ အဲသလို ဟုတျနရေငျ ထညျ့သှငျး စဉျးစားပေးလို့ ရပါတယျ။ ဒီလိုမှ မဟုတျရငျတော့ နိဋ်ဌိ တံပါပွီ။ အမှုဖိုငျကို အသာလေးပိတျပွီး ဘေးဖယျလိုကျပါ။ စဉျးစားစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
(၈) အထကျဖျောပွပါ နညျးလမျးအတိုငျး မဟုတျဘဲ အမရေိကနျကို ဘာပဲ အလိုကျပေးလို့ ပေါငျးရပေါငျးရ ပေါငျးသငျးခငျြဇော လှနျနတောက တဈမြိုး၊ တူရကီ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး မကျြနှာကို ပွေးမွငျပွီး OIC နဲ့လညျး မကျြနှာ မပကျြဖို့ လိုတယျလေ ဆိုပွီး အားနာတာက တဈဖုံ၊ နညျးလမျး မညီညှတျဘဲ နိုငျငံသား၊ ပွုနိုငျငံသားပေးဖို့ လုပျကွတယျ ဆိုရငျတော့ တိုငျးပွညျနဲ့ လူမြိုးကို ရောငျးစားကွတာပဲ ဖွဈပါတော့တယျ။
(၉) တမွနျနေ့ (၁၅-၀၆-၂၀၁၆) ရကျ နရေ့ကျစှဲပါ ရခိုငျပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ ဦးညီပု လကျမှတျနဲ့ ထုတျပွနျတဲ့ ရခိုငျပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ ညှနျကွားခကျြ အမှတျ (၆၆/၂၀၁၆)အားဖွငျ့ ပွညျနယျ အဆငျ့နဲ့ မွို့နယျအဆငျ့ “နိုငျငံသား သို့မဟုတျ နိုငျငံသား ပွုခှငျ့ရသူ ဆိုငျရာ စုံစမျးစဈဆေးရေး အဖှဲ့” တှကေို ဖှဲ့စညျး တာဝနျပေးအပျကွောငျး ညှနျကွားခကျြ ထုတျပွနျတာကို ကွားသိရပါတယျ။ အဲဒီ စုံစမျးစဈဆေးရေး အဖှဲ့တှမှော ဒသေခံ လူထုကို ကိုယျစားပွုနိုငျတဲ့သဘော ရှိသူတှေ ပါနိုငျအောငျ မွို့မိ မွို့ဖ (ဒါမှမဟုတျ) လူထုက တဈနညျးနညျးဖွငျ့ ရှေးခယျြပေးသူ နှဈဦးစီကို အရငျတုနျးက ထညျ့သှငျး ဖှဲ့စညျးခဲ့ပါတယျ။ အခု သိရှိရတဲ့ ဒီညှနျကွားခကျြမှာ မွို့မိ မွို့ဖ နှဈဦးအစား “ဌာနဆိုငျရာ အမြားကွညျညို လေးစားခွငျး ခံရသူ နှဈဦး” လို့ ဖျောပွထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။ စကား အသှားအလာအရ အမြားကွညျညို လေးစားခွငျးကို ခံရစဦေးတော့ ဌာနဆိုငျရာတှကေ မကွိုကျရငျ အဖှဲ့ထဲမှာ တာဝနျပေးလို့ မရဘူး ဆိုတဲ့သဘော ဖွဈနတေယျ။ အမိနျ့ နာခံနရေသူတှေ မဟုတျတဲ့ လှတျလှတျလပျလပျ သဘောထားပေးနိုငျသူ တဈယောကျမှ မပါနိုငျအောငျ ပွုလုပျထားတဲ့ အစီအမံ ဖွဈနတေဲ့အတှကျ ဒီအစီအမံဟာ လုံးဝ မဖွဈသငျ့ကွောငျးကို ပွညျသူလူထုက ကိုယျစားပွု ပွောဆိုခှငျ့ ပေးထားသော နိုငျငံရေးသမား တဈဦး အနဖွေငျ့ မိမိက ကနျ့ကှကျပါတယျ။ စုံစမျးစဈဆေးရေး အဖှဲ့ထဲမှာ မွို့လူထုက တဈနညျးနညျးဖွငျ့ ရှေးခယျြပေးထားတဲ့သူ အစိုးရ ဌာနဆိုငျရာက ကွိုကျနှဈသကျခွငျး၊ ကွညျညိုလေးစားခွငျးကို ရတယျ၊ မရဘူး ရယျလို့ ပွောနစေရာ မလိုသူ နှဈဦးကို အရငျအတိုငျးပဲ ထညျ့သှငျးပေးစလေိုကွောငျးကို တိုကျတှနျးပါတယျ။
ဥပဒေ အဟောငျးကို ဖကျြပွီး အသဈ ဘာကွောငျ့ ပွုခဲ့ကွရသလဲ
တညျဆဲ ဥပဒဖွေဈတဲ့ ၁၉၈၂-ခုနှဈ နိုငျငံသား ဥပဒကေို တိတိကကြ ကွပျကွပျမတျမတျ မတိမျးမစောငျး သုံးစှဲကွဖို့ ဘာကွောငျ့ တိုကျတှနျးနရေသလဲ ဆိုတာကို ပိုမို ထငျလငျး သိသာ စနေိုငျဖို့ရာ ၁၉၈၂ နိုငျငံသား ဥပဒေ ရေးဆှဲစဉျ ကာလ ၁၉၈၀ ပွညျ့နှဈ ဇှနျလက ပုံနှိပျ ထုတျဝခေဲ့တဲ့ “နိုငျငံသား ဥပဒကွေမျး ရေးဆှဲရေးနှငျ့ စပျလဉျြး၍ ရှငျးလငျးရေးနှငျ့ အကွံဉာဏျ တောငျးခံရေးအဖှဲ့ အဆငျ့ဆငျ့အတှကျ လကျစှဲစာတမျး” ထဲမှာ အရငျ ၁၉၄၈ ဥပဒဟေောငျးကို မသုံးတော့ဘဲ ဖကျြသိမျးဖို့ရာ ဖွဈလာရတဲ့ အကွောငျး တဈခကျြကို ဒီမှာ ပွနျလညျ ဖျောပွလိုပါတယျ။ ထိုစဉျက နိုငျငံတျော သမ်မတရဲ့ မှတျခကျြစကား ဖွဈပါတယျ။ “ဥပဒဟေောငျးအတိုငျး ဘိုးဘှား လေးဦးအနကျ တဈဦးသညျ မွနျမာဖွဈလြှငျ (မွေး)ကို တိုငျးရငျးသား အဖွဈ အသိအမှတျ ပွုမညျ ဆိုပါက အဆုံးမသတျနိုငျသညျ့ အခှငျ့အရေး တဈရပျဖွဈကွောငျး၊ တဈဖနျ ဘိုးဘှားလေးဦး စလုံး နိုငျငံခွားသား ဖွဈသညျ့တိုငျအောငျ နှဈအပိုငျးအခွားဖွငျ့ သားစဉျမွေးဆကျ သုံးဆကျ ဖျောပွထားသညျကို တှရေ့ကွောငျး၊ ထိုအခြိနျက လှတျလပျရေး ရရှိဖို့ ကွိုးပမျးနခြေိနျ ဖွဈ၍ လိုကျလြောပေးခဲ့ရခွငျး ဖွဈကွောငျး၊ ယခု အခြိနျတှငျ ယငျးအခကျြကို ဆကျလကျ ထားရှိရနျ မလိုတော့ကွောငျး” မှတျခကျြပေး လမျးညှနျခဲ့တာကို ဖျောပွထားပါတယျ။
ပွောခငျြတာက ဒီလောကျ အရေးကွီးတဲ့ ဥပဒေ တဈရပျမှာ ဒီလောကျထိကို အပေါကျကွီး ဟောငျးလောငျး ဒိုးယိုပေါကျ ပှငျ့နတောကွီးကို အပွီးပိတျကာ ဥပဒအေသဈ ပွုသငျ့တယျ ဆိုပွီး ၈၂ ဥပဒကေို ပွုခဲ့ကွတယျ။ ဒီဘကျခတျေကို ရောကျတော့မှပဲ ၈၂ ဥပဒေ စာအုပျကို လူမမွငျအောငျ အသာလေးပိတျပွီး အရငျ ဥပဒအေဟောငျး ၄၈ ဥပဒေ စာအုပျကို မဆီမဆိုငျ ဖှငျ့ပွီးတော့ နိုငျငံသား ပေးနိုငျဖို့ ကွံတာကို တှရေ့တဲ့အတှကျ၊ အံ့ရော . . . အံ့ရောလို့ပဲ မွညျတမျးရတော့မလား မသိတော့ပါဘူး။
နိုငျငံရဲ့အခြုပျအခွာ အာဏာဟာ နိုငျငံသားတှဆေီက ဆငျးသကျတာ ဖွဈတဲ့အတှကျ နိုငျငံသား မဖွဈသငျ့သူတှေ နိုငျငံသား ဖွဈလာတဲ့ အခါ မိမိတို့ နိုငျငံရဲ့ အခြုပျအခြာ အာဏာဟာ ထိပါးယိုယှငျးခွငျး ခံရပါတယျ။ နိုငျငံသား မဖွဈသငျ့သူတှေ နိုငျငံသား ဖွဈလာရုံမက အဲဒီ လူတှဟော နံဘေးကပျလကျြ လူဦးရေ မိမိတို့ထကျ သုံးဆမက မြားပွီး လူဦးရေ ပေါကျကှဲနတေဲ့ အိမျနီးခငျြးနိုငျငံက နိုငျငံသားတှနေဲ့ လူမြိုး တဈမြိုးတညျး (နီးကပါး) ဖွဈနတေဲ့ အခါ ဒီလူတှဟော အရအေတှကျအားဖွငျ့ တဈသနျးတညျးပါပဲ ဆိုတာထကျ အမြားကွီး အဓိပ်ပာယျ ဆောငျပါတယျ။ အနှေးနဲ့ အမွနျ ဆိုသလို နိုငျငံကဆြုံးခနျး ဆိုကျရောကျလာနိုငျတဲ့ အလားအလာမြိုး ဖွဈပါတယျ။
ညီအဈကိုခငျြး စကားမြားတတျ ရနျဖွဈတတျကွတာက လကျသီးနဲ့ ထိုးခငျြ ထိုးတတျကွတာက သဘာဝ ဖွဈပမေယျ့ အိမျကို ခိုးသူတှေ ခြိုးဖောကျဝငျရောကျ လာတဲ့ အခါကရြငျ ညီအဈကိုတှအေားလုံး လှံဆှဲ ရငျဆိုငျပွီး မိမိတို့ ကိုယျတိုငျရဲ့ အသကျကို သာမက မိမိတို့ရဲ့ အိုးအိမျ၊ အဈမ နှမ၊ မိခငျ ဖခငျတို့ကို ၀ိုငျးဝနျး ကာကှယျ ကွရပါကွောငျး . . . ပွညျထောငျစုသား အားလုံးတို့အား သတငျးစကား ပို့သ အပျပါတယျ။
Daily Eleven သတငျးစာ
၂၀၁၆-ခုနှဈ ဇှနျလ (၂၆) ရကျ ၊ တနင်ျဂနှနေေ့
Previous နိုငျငံ၊ လူမြိုးနှငျ့ အခြုပျအခွာအာဏာကို စောငျ့ရှောကျသော ဥပဒေ (အပိုငျး ၂)
Next မွနျမာတို့ရဲ့ “အမြိုး ဘာသာ သာသနာ”
နိုငျငံ၊ လူမြိုးနှငျ့ အခြုပျအခွာ အာဏာကို စောငျ့ရှောကျသော ဥပဒေ (အပိုငျး ၃) – laws | Kyaw Zaw Oo's Blog says: